အလင်းတည်ငြိမ်စေသည့်စက်ရုံ - တရုတ်အလင်းတည်ငြိမ်စေသည့်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
စရိုက်လက္ခဏာတွေ - DB 117 သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအပူနှင့်အလင်းတည်ငြိမ်စေသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလင်းတည်ငြိမ်မှုနှင့် antioxidant အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်း polyurethane စနစ်များစွာအတွက်ကောင်းမွန်သောအလင်းတည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအသွင်အပြင် - အဝါရောင်၊ viscous အရည်သိပ်သည်းဆ (20 ° C): 1.0438 g / cm3 ထဲမှာပါတဲ့ (20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)： 35.35 mm2 / s Applications ကို DB 117 ကို polyurethanes တွင် Reaction Injection molding, thermoplastic polyurethane synthetic သားရေ၊ cast cast polyurethanes တွင်အသုံးပြုသည်။e...
ထူးခြားချက် DB 75 သည်အပူနှင့်အလင်းတည်ငြိမ်စေသောစနစ်ဖြစ်ပြီး polyurethanes အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော application DB 75 ကို polyurethanes တွင် Reaction Injection Molding (RIM) polyurethane နှင့် thermoplastic polyurethane (TPU) တွင်အသုံးပြုသည်။ ရောနှောထားသည့်ဆေးကြောခြင်း၊ ကြွေပြားကပ်ခြင်း၊ တာပေါ်လင်နှင့်ကြမ်းခင်းပေါ်ရှိ polyurethane အပေါ်ယံလွှာအပြင်အသားရေဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထူးခြားချက်များ / အကျိုးကျေးဇူးများ DB 75 သည် polyurethane ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အလင်းရောင်နှင့်ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောပျက်စီးခြင်းများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမည် - ၂၊ ၂၊ ၆၊ ၆-တာရာမီသိုင်း - ၄-ပါပရီဒီဒီနိုင်းစတီရိတ် (ဖက်တီးအက်ဆစ်များအရောအနှော) CAS အမှတ် ၁၆း၁၆၆၇၇-၀၆-၆၀၆ မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C27H53NO2 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၄၂၃.၇၂ သတ်မှတ်ချက်ပုံပန်းသဏ္:ာန် - ဖယောင်းအရည်များအရည်ပျော်မှတ် - ၂၈ ℃မိနစ် Saponification Value, mgKOH / g: 128 ~ 137 Ash Ash ပါဝင်မှု - ခြောက်သွေ့မှုတွင် ၀.၁% အများဆုံးဆုံးရှုံးမှု - ≤ 0.5% Saponification Value, mgKOH / g: 128-137 ဂီယာ၊ %: ၇၅% min @ 425nm ၈၅% min @ 450nm Properties: ၎င်းသည် waxy အစိုင်အခဲ, အနံ့မရှိပါ။ ၎င်း၏အရည်ပျော်မှတ်သည် ၂၈ မှ ၃၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီး၊ ဆွဲငင်အား (၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) သည် ၀.၈95 ဖြစ်သည်။ အဲဒါ ...
ဓာတုဗေဒအမည်: အလင်းတည်ငြိမ်စေသော UV-3529: N, N'-Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) -1,6-hexanediamine ပိုလီမာများသည် morpholine-2,4,6-trichloro-1 နှင့်အတူ 3,5-triazine တုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်များ CAS NO .: 193098-40-7 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： (C33H60N80) n မော်လီကျူးအလေးချိန် Spec / သတ်မှတ်ချက်အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်မှအဝါရောင်အစိုင်အခဲအကူးအပြောင်းအပူချိန် - 95-120 ° C ခြောက်သွေ့ခြင်းအပေါ်ဆုံးရှုံးမှု: 0.5% max Toluene ပျော် ၀ င်မှုမရှိခြင်း: OK လျှောက်လွှာ PE-film, tape သို့မဟုတ် PP-film, tape သို့မဟုတ် PET, PBT, PC နှင့် PVC ။
ဓာတုအမည်: Poly [(6-morpholino-s-triazine-2,4-diyl) [2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl] imino] -hexamethylene [(2,2,6,6-tetramethyl) -4-piperidyl) imino] Cytec Cyasorb UV-3346 CAS NO.:82451-48-7 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： 31 C31H56N8O） n မော်လီကျူးအလေးချိန်： 1600 ± 10% သတ်မှတ်ချက်ပုံသဏ္:ာန် - အဖြူရောင်အမှုန့်များသို့မဟုတ်အရောင်ဖျော့အရောင် (APHA): 100 ခြောက်သွေ့ခြင်းအပေါ်အများဆုံးဆုံးရှုံးခြင်း၊ ၀.၈% max အရည်ပျော်မှတ်: / ℃: ၉၀-၁၁၅ လျှောက်လွှာ ၁။ အနည်းဆုံးအရောင်ထည့် ၀ င်မှု ၂။ မတည်ငြိမ်မှု ၃။ အခြား HALS နှင့် UVA များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောသဟဇာတဖြစ်မှု ၄ ။
ဓာတုဗေဒအမည်: Poly [[6- [(1,1,3,3-tetramethylbutyl) amino] -1,3,5-triazine-2,4-diyl] [(2,2,6,6-tetramethyl-4) -piperidinyl) imino] -1,6-hexanediyl [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) imino]]) CAS NO.:70624-18-9 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： [C35H64N8] n (n = 4-5) မော်လီကျူးအလေးချိန်：> 9000 သတ်မှတ်ချက်အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့အမှုန့်သို့မဟုတ်အမှုန့်အရည်ပျော်အကွာအဝေး (℃): 100 ~ 125 Volatilization (%): .80.8 (105 ℃ 2Hr) Ash (%): .10.1 Light transmittance ( %): 425nm 93 min 500nm 97 min (10g / 100ml toluene) အပလီကေးရှင်း ...
ဓာတုဗေဒအမည်: Poly [[6 - [(1,1,3,3-tetramethylbutyl) amino] -1,3,5-triazine-2,4-diyl] [(2,2,6,6-tetramethyl-4) -piperidinyl) imino] -1,6-hexanediyl [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) imino]]) CAS NO.:71878-19-8 / 52829-07-9 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C35H69Cl3N8 & C28H52N2O4 မော်လီကျူးအလေးချိန်： Mn = 708.33496 & 480.709 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အဖြူရောင်မှအနည်းငယ်အဝါရောင်အမှုန့်များ၊ အနံ့မရှိသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းအကွာအဝေး - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်။ ၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စတင်သတ်မှတ်ထားသောဆွဲငင်အား (၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) - ၁.၀ - ၁.၂ g / cm3 မီးပွိုင့် -> 150 ° C ငွေ့ဖိအား (...
ဓာတုဗေဒအမည်: Poly [[6 - [(1,1,3,3-tetramethylbutyl) amino] -1,3,5-triazine-2,4diyl] [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl ) imino] -1,6-hexanediyl [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) imino]]) CAS NO.:65447-77-0&70624-18-9 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： C7H15NO & C35H69Cl3N8 မော်လီကျူးအလေးချိန် n Mn = 2000-3100 g / mol & Mn = 3100-4000 g / mol သတ်မှတ်ချက်အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်မှအနည်းငယ်အဝါရောင် pastilles အရည်ပျော်မှတ် - ၅၅-၁၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မီးပွိုင့် (DIN 51758): 192 ° C ပမာဏသိပ်သည်းမှု - 514 g / l လျှောက်လွှာAreရိယာများ ...
ဓာတုဗေဒအမည်: Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyl) sebacate CAS NO.:52829-07-9 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ 28 C28H52O4N2 မော်လီကျူးအလေးချိန်： 480.73 သတ်မှတ်ချက်အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်အမှုန့် / အမှုန့်သန့်စင်မှု: 99.0% min အရည်ပျော်ခြင်း အချက် - ၈၁-၈၅ ဒီဂရီစင်တီမီတာပြာ - ၀.၁% - max ထုတ်လွှင့်မှု - ၄၂၅nm - ၉၈% မိနစ် ၄၅၀ မိနစ် - ၉၉% မိနစ်မတည်ငြိမ်မှု - ၀.၂% (၁၀၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ၂ နာရီ) Application Light Stabilizer 770 သည်အလွန်ထိရောက်သောအစွန်းရောက် scavenger ဖြစ်ပြီးအော်ဂဲနစ်ပိုလီမာများကိုကာကွယ်ပေးသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးခြင်း။ Light Stabili ...
ဓာတုဗေဒအမည်: N, N'-Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) -1,3-benzenedicarboxamide 1,3-Benzendicarboxamide, N, N'-Bis (2,2,6,6) -Tetramethyl-4-Piperidinyl) Nylostab S-Eed; Polyamide တည်ငြိမ်စေမှု၊ 1,3-Benzenedicarboxamide, N, N-bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) -; 1,3-Benzenedicarboxamide, N, N'-bis (2,2,6, 6-tetramethyl-4-piperdinyl); N, N” -BIS (2,2,6,6-TETRAMETHYL-4-PIPERIDINYL) -1,3-BENZENEDICARBOXAMIDE; N, N'-bis (2,2,6, 6-tetramethyl-4-piperidyl) isophthalamide; အလင်းတည်ငြိမ်အောင်လုပ်သည်။
Characterization DB 886 သည် polyurethane စနစ်များ (ဥပမာ TPU, CASE, RIM ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပလီကေးရှင်းများ) အတွက်ဒီဇိုင်းမြင့်သောခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်မှုအထုပ်ဖြစ်သည်။ DB 866 သည် thermoplastic polyurethane (TPU) တွင်အထူးအကျိုးရှိသည်။ DB 866 ကိုတာပေါ်လင်နှင့်ကြမ်းခင်းပေါ်ရှိ polyurethane အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အသားရေတို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Applications များ DB 886 သည် polyurethane စနစ်များအတွက်ထူးခြားသော UV တည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။ သမားရိုးကျ UV တည်ငြိမ်မှုစနစ်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့် ...
ဓာတုဗေဒအမည်: ဘီစ (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl sebacate CAS NO.:41556-26-7+82919 -37-7 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： C30H56N2O4 + C21H39NO4C30 မော်လီကျူးအလေးချိန်： 509 + 370 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အသွင်အပြင် - အဝါရောင်အလင်းရောင် viscous အရည်ဖြေရှင်းချက်ရှင်းလင်းမှု (၁၀ ဂရမ် / ၁၀၀ မီလီမီတာ Toluene): ဖြေရှင်းချက်ရှင်းလင်းသောအရောင်: ၄၂၅nm 98.0% min (Transmission) 500nm 99.0% min Assay (GC မှ): ၁. ဘီစ (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate: 80 + 5% 2.Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidi ။ ..